Football Khabar » जोभिक र हाजार्डपछि रियल मड्रिड ‘अप्रेसन पोग्बा’मा लाग्यो !
जोभिक र हाजार्डपछि रियल मड्रिड ‘अप्रेसन पोग्बा’मा लाग्यो !
यस समर सिजनमा ५ जना खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेको स्पेनिस रियल मड्रिड अब फ्रेन्च खेलाडी पाउल पोग्बा भित्र्याउन ‘अप्रेसन पोग्बा’मा लाग्ने भएको छ । प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको योजनामा रियलले एक साताको बीचमा इडेन हाजार्ड, लुका जोभिक र फर्लान् मेन्डी अनुबन्ध गरिसकेको छ ।
अब आफ्नो अट्याकिङ मिडफिल्डलाई थप बलियो बनाउन जिदान आफ्नै देशका स्टार पोग्बा भित्र्याउन क्लबसँग छलफलमा लागेका छन् । पोग्बा अट्याकिङ मिडफिल्डका निकै असरदार खेलाडी हुन् ।
तर, इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडले पोग्बाका लागि निकै महँगो १५० मिलियन युरो माग गरेको छ । इटालियन युभेन्टसले समेत पोग्बा भित्र्याउन इच्छा देखाइरहेका बेला अहिले रियल र युभेन्टस २६ वर्षीय यी खेलाडीका लागि दौडमा देखिन्छन् ।
स्पेनिस मिडियाका अनुसार जिदानले अब पोग्बा भित्र्याउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । र, त्यसका लागि उनले क्लबलाई जति रकम पनि तिर्न अनुरोध गरेका छन् ।
रियलले पोग्बाका लागि १३० मिलियन युरोसम्म खर्चिन तयार रहेको खबर रियल मड्रिड निकट मानिने ‘मार्सा’ले छापेको छ ।
प्रकाशित मिति ३ असार २०७६, मंगलवार १२:०१